Qeybta:Aaladda10 min akhris
Farqiga Isku Dhexeeya
Waayo-aragnimadayada horumarinta karti-xirfadeedka dhaqamada
Maqaalkani wuxuu asal ahaan kasoo muuqday arrinka Spring 2018 Kordhinta Forum. Waxaa loo habeeyey oo lagu soo dhejiyey ogolaansho ka timid Guddiga Minnesota ee aasaaska.
Iyadoo laga hadlayo isbeddellada farqiga u dhaxeeya sinaan la'aanta xagga waxbarashada iyo shaqada ee Minnesota, guddiga iyo xubnaha shaqaalaha ee McKnight Foundation waxay waydiisteen wixii intaa ka badan ee ay samayn lahaayeen si loo daboolo farqiyada kala duwan ee caqabadaha noocan ah. Inkasta oo saldhigga gaarka ah ee qoysku uu lahaa dhaxal dheer oo ah inuu ku guuleysto isla markaana u muujiyo sinnaanta wada shaqaynta iyo iskaashiga beesha, guddigu wuxuu xaqiiqsaday in ay weli wax badan ka qabteen si ay si buuxda u fahmaan jumladaha adag ee kala duwanaanshaha, sinaanta iyo ka mid noqoshada. Si kale haddii loo dhigo, ma aysan ogeyn waxa ay u baahan yihiin si ay u ogaadaan.
Kate Wolford, Madaxa Hay'adda McKnight Foundation, ayaa fahmay muhiimadda codsiga guddiga. "Iyadoo la eegayo isbeddelada dadweynaha ee isbeddelka ah ee beelaheena, xogta qoto dheer oo joogto ah oo ku saabsan cunsuriyadda qaab-dhismeedka, iyo war-celinta ka soo jeeda wada-hawlgalayaasha beesha, waxaan aragnay sida ay tani u sii wanaajin karto saameynta deeq-bixiyadayada," ayay tiri.
Wolford waxay si dhow ula shaqaysay Bernadette Christiansen, madaxweyne ku-xigeenka hawlaha, si ay u tixgeliyaan tallaabooyinka xiga. Christiansen ayaa baadhay sida aasaaskii kale loo dhexgeliyey kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada shaqadooda siyaabo macna leh. McKnight wuxuu doortay hab horumarineed oo xooga saara kartida dhaqamada kala duwan ee loo yaqaan 'platform' kaas oo ah dhisida kala duwanaanta, sinnaanta, iyo habka isku dhafka.
McKnight waxa uu go'aansaday in uu la socdo caawinta MCF, oo bilaabay inuu bixiyo adeegyo la-talin xubnahiisa. McKnight waxay ku hawlan MCF inay abuurto oo ay keento dhowr kooxood iyo fursado shakhsi ah si ay u fahmaan ayna u horumariyaan aqoonta dhaqamada kala duwan. Shaqaalaha MCF waxay la wadaagaan Mid ka mid ah Ummah La-tashiga, koox talo-bixin oo maxalli ah oo ku takhasusay horumarinta dhaqamada kala duwan si ay ugu hogaamiso shaqada guddiga maamulka McKnight iyo shaqaalaha. Alfonso Wenker oo ka tirsan MCF (hadda Kooxda Dynamics) iyo Nehwr Abdul-Wahid oo ka mid ah Ummah Talo-siinta ayaa fududeeyay bilawga safar dheer oo loogu talagalay guddiga iyo shaqaalaha McKnight.
Kulanka kowaad, fududeeyayaashu waxay u soo bandhigeen kooxda Qorshaha Horumarinta Dhaqannada (IDI), qalab lagu fahmo kartida dhaqanka iyo qalab loo adeegsado in lagu cabbiro kartida dadka ee lagu aqoonsanayo lana socodsiiyo kala duwanaanshaha dhaqanka heerar badan oo murugo leh. Habkaan kobcinta ayaa diiradda saaraya qayb ka mid ah horumarinta fahamka faraqa u dhexeeya waxa loo yaqaan dhaqanka ujeedada iyo dabiiciga ah.
"Dhaqanka ujeedkiisu waa fanka, luqadda, cuntada," ayuu yiri Wenker. "Dhaqanka dabiiciga ahi wuxuu ka kooban yahay dhammaan siyaabaha aan la garanayn ee aynu nahay sida aan nahay, sida haddii aad indho indhayn u aragto qof marka aad la hadasho." Dhaqanka dabiiciga ahi waa halka macnaha isha lagu hayo indhaha.
Kala duwanaanshaha dhaqanka maskaxeed waa mid sahlan. Dhaqanka dabeecadda ah way adagtahay in la arko. Taasi waa halka IDI ay ka timaado. Guddiga McKnight iyo xubnaha shaqaalaha waxay qaadeen qalab 50 su'aalood oo online ah. Guddi kasta iyo xubin ka mid ah shaqaaluhu waxay heleen qiimeyntooda shakhsi ahaaneed, iyo koox-kooxeed oo ka tarjumaysa ururka guud ahaan sidoo kale waxaa la sameeyay markii dhan qiimayn la dhammeeyey.
Raadinta Xaqiiqada Adag
Qormada McKnight waxay muujineysaa jihayn yaraynta, iyo sida uu qabo tababarayaasha IDI, 67% dadka qaata IDI waxay isticmaalaan maskaxda Minimization - taas oo ku calaamadsan fahamka faraqa dhaqanka iyada oo isla mar ahaantaana ay ku tiirsanaanayaan wadaagada u dhaxeeya kooxaha. Dadka leh faalladan waxaa laga yaabaa inay arkaan farqiga muuqaalka ama dusha sare, laakiin waxaa laga yaabaa in la dhimayo (yaree) sida farqiga dhaqameedka u kala duwanaanta uu ku saameeyo dabeecadaha, siyaasadaha, iyo dhaqamada.
"Yaraynta macnaheedu waa inaan dhageysto farqi," ayuu raaciyay Wenker. "Laakiin waxaan maqlay maqaaxida. Anigu waxaan gacanta ku haystaa oo waxaan ku idhi, Kaalay oo arag. Laakiin dhanka kale gacanta ayaan ku siiyaa gacanta adag. Dhaqan ahaan waxaan dhihi karnaa waxaan dooneynaa aragti kala duwan, laakiin markaa marka aan dadka ka soo qaadano asal ka duwan, waxaan isku duba ridnaa samaynta. "
Barashada in profile-kooda ay ku yareeyeen minimization waxay ahayd wicitaan ku saabsan waxqabadyo badan oo ka tirsan shaqaalaha McKnight. "Tani waa koox dad ah oo aad u sarreeya. Si aad u ogaato in profile-ka kooxdeena ay hoos u dhaceen - sida 67% dadka - waxay muujiyeen in aagga dhaqanka dhaqameedka, waxaan lahaa meelo badan oo lagu hagaajiyo, "ayuu yiri Christiansen. "Waxaa jiray rabitaan degdeg ah oo ah ballanqaad iga yimid in kooxdu dib u qiimeyn doonto qiimeynta 18 bilood. Dadku waxay rabeen inay arkaan koritaan iyo horumar. "
Nehrwr Abdul-Wahid wuxuu hogaamiyaa shaqaalaha McKnight Foundation ee xeeladaha istiraatiiji dhaqameedka.
Aqoonsiga ayaa tilmaamaya awoodda hadda jirta iyada oo weliba tilmaamaysa nooca barashada loo baahan yahay si loo dhiso karti weyn. Shaqaalaha McKnight waxay ku jireen 18 bilood inay ku shaqeeyaan horumarinta xirfadahaan, waxaana fududeeyayaashoodu u horseeday ururka iyada oo loo marayo todoba toddobo oo tababaro oo dhan ah. Intaa waxaa dheer, McKnight wuxuu tababaro u hayaa shaqsiyaadka iyo kooxaha.
Abdul-Wahid wuxuu sharxayaa in caqabada la yareeyo Minimization waa mid ka mid ah qaybaha muhiimka u ah labadaba waa xoog iyo isdhexgalka. "Waxaan u baahannahay wadaag ah in aan aqoonsano bani-aadmiga kale," ayuu yidhi. "In la aqoonsado isbeddelka u dhexeeya dhaqamada iyo rajooyinka la wadaago waa xoog. Laakiin Minimization waxay keenaysaa in badan oo ku tiirsanaanta wada noolaanshaha. Yaraynta waxay rabtaa jawi raaxo leh. Yarayntu waa iskahorimaad. Waxaa jira awood la'aan in la yeesho wada hadal daacad ah oo sax ah. "
Marka ay kooxdu fahamsan yihiin awoodda iyo karti-darrada ka jirta jihada ee Iskuduwaha Horumarinta Dhaqameedka (IDC, aragti ku saleysan IDI), waxay ahayd wakhtigii si aad ah u sahaminta fikradaha qarsoon ee ururka. Iyada oo la adeegsanayo layliyo koox u riixday dhinacyo aan la arki karin, McKnight wuxuu bilaabay inuu arko xeerarka qarsoon ee dhaqanka madaxbannaan ee waddankeena iyo xafiisyadeeda. McKnight wuxuu bilaabay inuu arko sida nidaamyada kala duwan ee HR ay u maleynayaan in ay mudnaan u leeyihiin qaar ka mid ah qaababka iyo hababka qaarkood marka ay dadka kale ka fogaanayaan. Tani waxay ka dhigtay ururku inuu sii wado qaddiyaddiisa oo uu ka caawiyay dadku inay arkaan "taasi waa habka aan wax u qabanno halkan" halkan wuxuu ahaa codka yaraynta khilaafaadka.
"Waxaan ahay wariyaal toos ah," ayuu yidhi Christiansen. "Waxaa sidoo kale si fiican ii adeegay xirfadeyda. Laakiin iminka waxaan arki karaa in qaabka isgaadhsiintu uu yahay mid shakhsiyeed iyo mid dhaqameed. "Christiansen wuxuu ogaadaa in loola jeedo dhaqan ahaan karti leh inuu u furfuran yahay qaababka kale ee isgaarsiinta, oo si firfircoon uga shaqeynaya in la aqbalo oo la is qabsado.
Hirgelinta isbeddelka natiijooyinka dhabta ah
Karyn Sciortino Johnson ayaa ka hadlaya qodobada soo socda ee kacsan inta lagu jiro aqoon iswaydaarsiga IDI.
Wax yar ka dib, McKnight wuxuu diyaar u ahaa inuu bilaabo inuu dhigo wixii ay barteen. Tallaabada xigta waxay ahayd in la sameeyo waxa loo yaqaan Kooxaha Waxbarashada Waxqabadka, kooxo yaryar oo loo xilsaaray inay keenaan isbeddel hay'adeed iyada oo la adeegsanayo maskax fayow oo cusub. Ku dhawaad kala badh dhammaan shaqaalaha Aasaasiga ah ayaa ka qaybqaatay Kooxda Waxbarashada Waxqabadka. Ka dib markii shaqaaluhu ay ogaadeen meelaha muhiimka ah ee ay ku taliyeen in ay arkaan isbeddel ku yimaad siyaasadaha iyo nidaamyada, McKnight waxa uu dejiyey saddex meelood oo ka mid ah Kooxaha Wax-barashada Wax-qabadka: Waxbarashada qoto dheer, deeq-lacageedka, iyo siyaasadaha fasaxa shaqaalaha ee ku-darsiga iyo fasaxyada. Koox kasta ayaa lagu soo oogay inay soo uruurinayso jawaab celin ka timid asxaabtooda, horumarinta qorshe iyo samaynta talooyin gaar ah.
"Midda ugu fudud waa Khayraadka Shaqaalaha," ayuu yidhi Christiansen. "Mid ka mid ah natiijooyinka ayaa ahaa go'aanka lagu beddelayo in la yeesho 11 fasax oo loo qoondeeyay 12 maalmo aan ku-meel-gaar ah oo dadku doorteen naftoodana ka dibna fiiro gaar ah leh." Xitaa isbeddel sahlan oo fudud sida tan ma ahayn mid fudud. "Hawlgalku wuxuu leeyahay waxyaabo ay ka mid yihiin xarumaha, soo dhawaynta, hawlgallada, iyo dadka ku nool HR," ayay tiri. Dhammaadkii, kooxdu waxay awood u yeelatay in ay fuliso isbedelka.
Xilligii xagaaga 2017, kooxdu waxay qabatay dhamaan shaqaalihii dib u soo celinayey kuwaas oo ku calaamadeystay dhagax weyn oo ku saabsan dhammaan bilahan barashada iyo tijaabinta fikradaha cusub. Fududeeyayaasha ayaa shaaca ka qaaday natiijooyinka qiimaynta dhow ee shaqaalaha ay qaadeen. Qofkasta wuu la yaabay haddii wakhtiga, lacagta iyo dadaalka ay shaqaalaha McKnight maal gashadeen 18kii bilood inay keeneen wax ku oolnimada horumarinta dhaqamada. Tababbarayaasha IDI ayaa sheegaya in isbeddelka minimization-ka ee la aqbali karo, jihada soo socota ee joogtaynta horumarinta, waa midka ugu adag; Ururada intooda badani iskama baddalaan. Markii la ogaaday in horumarka dhaqameed ee McKnight ay dhab ahaantii u wareegtay aqbalaadda, qolku wuxuu jebiyay farxad, waxaana jiray wada jir ah "Whoop!"
Nate Wade ayaa ka wada hadlaya dhismaha iyo xisaabtanka inta lagu jiro shaqaalah IDI.
Marka laga eego shaqaalaheeda, Wolford waxay caddaynaysaa in ujeedada hay'adda ee balanqaadka kala duwanaanshaha, sinnaanta iyo ka mid noqoshada aysan ku dhammayn tababarka shaqaalaha ee IDI. "Waxaan u aragnaa in ay tahay miisaaniyad muhiim u ah shaqaalaheena si fiican u qalabeysan si ay u dhex galaan khilaafaadka, IDI-na waxay ahayd hal gacan oo naga caawiya kordhinta awoodda ururada iyo waxtarka," ayay tiri. "Tallaabada xigta waa sii socoshada horumarkan iyada oo kor u qaadeysa aaggaga diiradda si aan u horumarino kala duwanaanshaha, sinnaanta iyo ka mid noqoshada siyaasadeena, dhaqamada iyo dabeecadaha. Waxaanu aqoonsanay tallaabooyinka soo socda oo ay ka mid yihiin barashada qoto dheer ee khiyaanada aan tooska ahayn iyo midab-takoorka si loo ogaado istaraatiijiyadeena iyo qaabkeena. Iyadoo la adeegsanayo waxa aan ka baranay marxaladan bilowga ee shaqada waxaan tixgelin doonaa sida aan u wajaheyno kaalinteena dibadda sida masruufaha, loo shaqeeye, shirkad dhaqaale, maalgeliye hay'adeed, hogaamiye iyo hogaamiye fikir. "
Isbedelka Hay'ad-Isbedelka Wanaagsan
McKnight wuxuu sameeyay dhowr isbeddel oo ah natiijada tooska ah ee shaqada IDI. Maamulaha barnaamijka ee Kooxda Caalamiga ah ayaa hadda ka qayb qaata boqolkiiba 40 wakhtigeeda si ay u taageeraan shaqada DEI. Guddida la-talinta ee DEI - oo ka kooban Wolford, Christiansen, iyo Kara Carlisle, madaxweyne ku-xigeennada barnaamijyada, iyo sadexda shaqaale ee hogaamiya kooxaha asaasiga ah ee waxbarashada - ayaa sameeyay aasaas si ay u hagaan shaqada shaqaalaha ee la xiriira DEI. Bishii Jannaayo ee sanadkan, McKnight ayaa sii daayay a bayaanka dadweynaha ee ka go'naanta kala duwanaanshaha, sinaanta iyo ka mid noqoshada. Kooxda Waxbarashada ee Hawl-galinta ah ee deeq-bixiyeyaasha ah waxay soo saartey qorshe ay ku ururinayso xogta dadweynaha ee xogta iyo shaqaalaha deeq-bixiyeyaasha ee dalbanaya maalgelinta McKnight.
Wolford waxay waydiisatay qof walba - iyadoon loo eegin mawqifka ama waaxda - in miisaaniyada boqolkiiba 5 ay waqtigooda si ulakac ah diiradda u saaraan kala-jaadnimada, sinaanta iyo ka-qaybgalka. Tani waxay macnaheedu noqon kartaa wax walba oo ka socda tababar shakhsiyeed oo joogto ah si uu uga barto kuwa deeqda bixiya ee hogaamiya hawlaha sinnaanta. Ama waxaa loola jeedaa in si firfircoon loogu raadsado natiijooyinka kala duwan ee maaliyadeed, sida shaqooyinka socda ee kooxda ee qeyb ka mid ah Jaangooyaha Sinaanta Sameeya Iskuduwaha, ama kooxda baadhitaanka kooxda Mississippi River ee la-hawlgalayaasha beelaha kala duwan.
Mana aha kaliya kooxaha barnaamijka ee qorsheynaya sidii loo dhexgelin lahaa DEI shaqadooda. Dhaqaalaha, kooxaha isgaarsiinta iyo kooxaha hawlaha ayaa sidoo kale raadsaday habab lagu dhex galo DEI habdhaqankooda. Kooxda qaabilaada iyo dhismayaasha ayaa maskaxda ku hayay qaabab ay uga dhigaan booska McKnight ee goobta kulanka xitaa soo dhaweyn iyo wadajirba. Kooxda isgaarsiinta ayaa baaray sida loo adeegsado sawirro dheeraad ah iyo luuqad waxaanay qaadeen tallaabooyin ay ku dhigayaan website-keeda inay u sahlanaan karaan dadka isticmaala awoodo kala duwan. Mid ka mid ah hal tababare, agaasimaha IT ayaa la weydiiyay, "Ma leenahay wax hagid ah oo ku saabsan sida loola hadlo lammaanayaasha ganacsiga ee ku saabsan kala duwanaanshaha? Sababtoo ah waxaan jeclaan lahaa inaan la hadlo hay'ad lamaan ah oo aan lahayn kala duwanaanshahooda shaqaalahooda. "
"Waxaan aqoonsanahay inay taasi tahay safar, mar walbana sax ma noqon doono," ayuu yiri Wolford. "Waxaan lahaanay sheekooyin aan fiicneyn iyo waqtiyo aan joogno. Markasta waanu isbedeleynaa si aan u aragno natiijooyinka si dhakhso ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa naloo dhiirrigeliyay ballanqaadka la wadaago ee guddiga iyo shaqaalaha inay si buuxda u muujiyaan qiyamka iyo aragtida aan dooneyno iyo bulshadeena. "
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan adeegyada MCF ee degaankaa, la xiriir Camille Cyprian, Agaasimaha MCF ee Istaraatiijiyada Barnaamijka iyo Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Ka mid noqoshada 612-335-3556.
Dennis Cass waa qoraa uu shaqadiisa ka soo muuqday New York Times Magazine, Mother Jones iyo joornaalka onlineka Slate.
Suufinta Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Ka Qaybqaadashada
By Kate Wolford Janaayo 2018